Softmedal - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ Android ဂိမ်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Euro Bus Simulator 2018 သည်ကစားသမားများအားလက်တွေ့ကျကျ simulation အတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ မတူညီသောဘတ်စ်ကားရွေးချယ်မှုများပါ ၀ င်သောမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုသည်၎င်း၏အရည်အသွေးဂရပ်ဖစ်များနှင့်ပျော်စရာကစားစရာလေ ၀ င်လေထွက်နှင့်အတူအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။...
မိုဘိုင်းပဟေဋ္ဌိများထဲမှ Candy Bears 2018 ကို Rich Joy မှအခမဲ့ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Candy Bears 2018 သည်အရောင်အသွေးစုံလင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ကစားသူများအားတင်ပြသောဂန္ထဝင်သကြားလုံးပေါက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒရှိပါက၎င်းတို့အားဘေးချင်းကပ်လျက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်တူညီသောသကြားလုံးအမျိုးအစားကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ...
ဤဂိမ်းတွင်၊ လယ်ယာအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေစဉ်မယုံကြည်ခြင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏လယ်ယာနှင့်၎င်း၏လယ်ကွက်များကိုထိန်းချုပ်ပါ။ စိုက်ခင်းတွင်မျိုးစေ့များစိုက်ပျိုးပါ၊ အစေ့များကိုကြဲဖြဲရန်၊ လယ်ယာသီးနှံများကိုရေလောင်းပါ။ ရိတ်သိမ်းရန်၊ မြေကြီးသို့သယ်ယူရန်ထွန်စက်ကိုမောင်းပါ။ ဤအလုပ်အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်ထွန်စက်တည်ရှိရာဧရိယာသို့သွားရန်လိုအပ်သည်၊...
Rider 2018 သည်သင်ခက်ခဲသောအပုဒ်များပေါ်တွင်ပြသနိုင်သောမော်တာပြိုင်ကားတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုဆွဲယူသည်။ ၎င်း၏လက်တွေ့လေထုနှင့်လက်တွေ့ကျသောဂရပ်ဖစ်များဖြင့်ပေါ်လွင်နေသောဂိမ်းတွင်သင်သည်စွန့်စားမှုမှစွန့်စားမှုသို့ပြေးပြီးသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသသည်။ Rider 2018,...
Fire Truck Driver Emergency 2018 ဖြင့်ငါတို့သည်မိုဘိုင်းလ်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ မိုဘိုင်းခြင်း simulation ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခမဲ့ကစားခဲ့သည့် Fire Truck Driver Emergency 2018 နှင့်အတူငါတို့သည်မြို့၌မီးကိုငြိမ်းသတ်ရန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ မတူညီသောမီးသတ်ထရပ်ကားပုံစံ ၃...
Car Racing 2018 ကိုမိုဘိုင်းပြိုင်ကားကစားသူများအားအခမဲ့ကစားရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ အလယ်အလတ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အလတ်စားအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သောမိုဘိုင်းပြိုင်ကားဂိမ်းတွင်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ကွဲပြားသောယာဉ်များပါဝင်သည်။ ကစားသမားများသည်မတူညီသောပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်နိုင်သည်၊...
Mega Ramp Stunts 2018 နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ပြိုင်ပွဲများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်မည်။ Mega Ramp Stunts 2018 သည်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိအားကစားဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းချစ်သူများအားအခမဲ့ပေးသောအရာများစွာ၌ကွဲပြားသောပြိုင်ကားများပါ ၀ င်သည်။ PlayPlanet...
Fingersofts Hill Climb Racing ဂိမ်း၏ Hill Climb Racer 2018 ၏မိတ္တူကို New Google Play တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Jackson Martinez တီထွင်သောစွန့်စားခန်းဂိမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်ကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီးမိုဘိုင်းလ်ကစားသမားများအတွက်အခမဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ရောင်စုံအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သောထုတ်လုပ်မှုတွင် 2D အခြေခံရူပဗေဒအင်ဂျင်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။...
မိုဘိုင်းပြိုင်ကားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သော Supercar Racing 2018 ကို Google Play တွင်အခမဲ့ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Supercar Racing 2018 သည်ကစားသမားများအား HD အရည်အသွေးဂရပ်ဖစ်များဖြင့် adrenaline ပြည့်စေသောပြိုင်ပွဲများသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုများရှိသောဂိမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျယ်ပြန့်ကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာကိုပေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုတွင်၊...
PES 2019 ကို download လုပ်ပါ။ PES 2019 ဟုလူသိများသော Pro Evolution Soccer 2019 သည် Steam တွင်သင်ရနိုင်သောအောင်မြင်သောဘောလုံးဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားသည်။ ဂျပန်ဂိမ်း developer နှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Konami မှတီထွင်သော Pro Evolution Soccer series သည်ထောင်စုနှစ်နောက်ပိုင်းကစားသမားများ၏ဘ ၀ တွင်ပါ ၀...
မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် Play Store တွင်အခမဲ့ဖြန့်ချိသော Mad City Military II Demobee 2018 သည်ကစားသမားများအားတင်းအားဖြည့်ပေးသည်။ Android ပလက်ဖောင်းကစားသူများအတွက်အထူးထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်ရေး၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်နှင့်ကွဲပြားသောမစ်ရှင်များနှင့်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်မည်။ ငါတို့ကအရမ်းအားကောင်းတဲ့စစ်တပ်ယူနစ်ထဲကို...
မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်း၏အောင်မြင်သောနာမည်များအနက်တစ်ခုမှာ CBS Interactive, Inc. သူကကစားသမားတွေရဲ့အရသာကိုဂိမ်းအသစ်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ CBS Interactive, Inc. သည်အားကစားဂိမ်းများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ Franchise Baseball 2018 အားကစားနည်းသစ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများအားတင်ပြလိုက်ပါသည်။ Franchise Baseball 2018 ကို download...
မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အလွန်အောင်မြင်သောအားကစားဂိမ်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသော CBS Interactive Inc သည်သူ့ကိုယ်သူနာမည်ဆက်လက်ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဘောလုံးလောကကိုမိုဘိုင်းလ်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှကစားသမားများအားတင်ပြသော developer အဖွဲ့သည်၎င်း၏ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်သော Franchise Football 2018 ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်။...
PES 2020 (eFootball PES 2020) သည် PC တွင် download လုပ်ပြီးကစားနိုင်သောအကောင်းဆုံးဘောလုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ PES 2020 ဘောလုံးပွဲသည် Konami မှနာမည်ကျော်ကွင်းလယ်လူAndrés Iniesta ၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ယူ၍ FIFA 20 ကဲ့သို့တိုးတက်မှုများနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများစွာပါလာသည်။ ရွေ့လျားပျံသန်းနိုင်သောကျွမ်းကျင်မှုအသစ်၊ ပွဲစဉ်နည်းစနစ်သစ်များ၊...
weMessage အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ Android ကိရိယာများတွင် iMessage စာတိုပေးပို့ခြင်း app ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါပြီ။ iOS ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် Apple မှကမ်းလှမ်းထားသော iMessage application သည်အလွန်အောင်မြင်သော application တစ်ခုဖြစ်ပြီး iPhone အသုံးပြုသူများကြားတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် Android အသုံးပြုသူများသည် weMessage...
Ashampoo Office program သည်အခြားရုံးအစီအစဉ်များကိုငြီးငွေ့ပြီးစျေးသက်သာသောအခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကိရိယာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်း။ အသုံးဝင်သော interface နှင့်၎င်း၏လျင်မြန်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ရုံးအစီအစဉ်လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်လိမ့်မည်။ program...
Pomotodo သည် Google Chrome တွင်သုံးနိုင်သောလုပ်စရာစာရင်း extension တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်လာသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်၏ web browser သည်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအလုပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် tool တစ်ခုဖြစ်စေသည်၊...
Office 365 သည်ကွန်ပျူတာ (PC) (သို့) Mac များ၊ သင်၏ Android၊ iOS နှင့် Windows Phone ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များတွင်သုံးနိုင်သော Microsoft Office suite တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအခကြေးငွေပေးချေသောရုံးအထုပ်ကြောင့်လူ ၅ ယောက်သည်ရုံးပလီကေးရှင်းတစ်ခုတည်းမှအကျိုးခံစားနိုင်ပါသည်။ Office 365...
PDF Shaper သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော interface ဖြင့်အခမဲ့ PDF converter နှင့်ထုတ်ယူခြင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် multi-PDF အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ tabbed ပုံစံချခြင်းနှင့်အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်ယူခြင်းကဲ့သို့အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ PDF Shaper အင်္ဂါရပ်များ PDF စာရွက်စာတမ်းများကို MS Word format သို့ပြောင်းသည်...
EMDB ဟုလူသိများသော Erics Movie Database သည်ရုပ်ရှင်ကြည့်သူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အလွန်သုံးရလွယ်ကူသော interface ပါ ၀ င်သော software ကြောင့်သင်၏ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်း (သို့မဟုတ်သင်၏ DVD မှတ်တမ်း) ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာသို့စာရင်းလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်အားလုံးကို software name ရှိ IMDB database မှယူသည်၊...
GRIME¸သည်မြန်ဆန်။ အမှားကင်းသောအက်ရှင်စွန့်စားခန်းအခန်းကဏ္ playing ကစားသည့်ကစားနည်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ခန္ဓာဗေဒပဟေိလောကကိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါပုံသဏ္andန်နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သက်ရှိလက်နက်တွေနဲ့မင်းရဲ့ရန်သူတွေကိုချေမှုန်းလိုက်ပါ၊ ပြီးတော့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့အတွက်သူတို့လက်ကျန်အရာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါ။ GRIM ကို...
Xiaomi Mi PC Suite သည်သင်၏ Xiaomi ဖုန်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်၊ ဖုန်းပေါ်ရှိဖိုင်များကိုစီမံရန်၊ သင်၏ဒေတာများကိုအရန်ကူးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ ကွန်ပျူတာမှတဆင့်ဆော့ဝဲများနှင့်အခြားအရာများအားခွင့်ပြုနိုင်သောအခမဲ့အသုံးချနိုင်သောဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Xiaomi Mi PC Suite ကို download လုပ်ပါ Xiaomi စမတ်ဖုန်းများအတွက်...
Samsung Flow သည် Windows 10 PC အသုံးပြုသူများအတွက်အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တွဲဖက်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကိရိယာသည်စမတ်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်သို့မကြာခဏဖိုင်များလွှဲပြောင်းခြင်း (သို့) လွှဲပြောင်းပေးသောမည်သူမဆိုအတွက်အသုံးဝင်သည်။ Samsung Flow ကို download လုပ်ပါ သင်၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ် PC...
Metal Slug: Commander သည်စစ်ရေးစစ်ပွဲသုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Metal Slug: Commander ကို download လုပ်ပါ နောက်ဆုံးအာကာသကျူးကျော်စစ်ပွဲကတည်းကနှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားပြီးစစ်ပွဲများမှကမ္ဘာကြီးသို့ယူဆောင်လာသောဒဏ်ရာများသည်တဖြည်းဖြည်းသက်သာပျောက်ကင်းလာသည်။...
Heroes of the Dark သည်မဟာဗျူဟာကျသောကစားနည်းနှင့်သွက်လက်သော RPG တိုက်ပွဲများနှင့်အတူ Victorian ခေတ်၏အမှောင်ထုကိုသင်တွေ့ကြုံရသည့်မဟာဗျူဟာကျသောကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲသည်လကိုဖျက်ဆီးသောရက်စက်သော Victorian ကမ္ဘာကိုစူးစမ်းပါ။ Dark of Heroes ကို download လုပ်ပါ အထက်တန်းလွှာသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်များ၊...
NieR Reincarnation သည် Square Enix နှင့် Applibot မှတီထွင်ထားသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အက်ရှင်အခန်းကဏ္ playing ကစားခြင်းဖြစ်သည်။ NieR ဝင်စားခြင်းကို download လုပ်ပါ NieR စီးရီးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းသည်မိုဘိုင်းသို့လာနေပြီ။ အဆိုပါဇာတ်လမ်း The Cage လို့ခေါ်တဲ့အရပျ၌ဖြစ်ပျက်။ အေးခဲနေသောကြမ်းပြင်ပေါ်၌မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်နိုးလာသည်။...
Squad Alpha သည်စစ်နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူစွဲငြိ၊ မြန်၊ မြန်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသေနတ်ပစ်ရန်လွယ်ကူသောအနေဖြင့် Android platform တွင်နေရာယူသည်။ ၎င်းတွင်စမတ်စက်ပြင်များ၊ များပြားလှသောအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သောလက်နက်များနှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းများကိုမြှင့်တင်ပေးမည့်စွဲလမ်းစေသော၊ Squad Alpha ကို...
Contenting သည်အတုထောက်လှမ်းရေးမှစွမ်းဆောင်ထားသောထူးခြားသောမိုဘိုင်း application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအင်တာနက်ပေါ်ရှိအရည်အသွေးနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေရေး၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ အားကစား၊ စီးပွားရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာ၊...
Perfect World: Revolution သည်အံ့သြဖွယ် 3D ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဒေါင်လိုက်ပုံစံကစားနည်းကိုပေးသည်။ ဒေါင်လိုက်အပြင်အဆင်အသစ်ဖြင့်ဂိမ်းသည်လက်နှစ်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုအစားထိုးပြီးဂိမ်းကိုလက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်လွယ်ကူစွာကစားစေပြီးပထမ Perfect Word ၏မူလလက်ရာများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ Perfect World, Seeker မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါသည်။ Perfect World: Revolution ကို...
Kingdom of Pirates သည်ပင်လယ်ဓားပြများနှင့်ဆင်တူသော RPG ဂိမ်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့သူရဲကောင်းပင်လယ်ဓားပြတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီး Conquest of the Journey ကိုစတင်လိုက်ပါ။ Pirates of Kingdom ကို download လုပ်ပါ စွဲငြိဖွယ်ပင်လယ်စွန့်စားခန်းတစ်ခုကိုစတင်ပါ၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောပင်လယ်ထဲသို့ငုပ်ပါ၊...
Zombieland: AFK Survival သည်သင်ဖုတ်ကောင် ဦး နှောက်ကိုမှုတ်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်စေသောကာကွယ်ရေးအခြေပြုမိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Zombieland: AFK Survival ကို download လုပ်ပါ လမ်းကိုထိပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများနှင့်ဖုတ်ကောင်များကိုရိုက်ချိုးခြင်း၏စွန့်စားမှုတွင်ပူးပေါင်းပါ။ သင်သူရဲကောင်းများစုဆောင်းပြီး epic zombie shooter game...
Multi Theft Auto သည် Rockstar ဂန္ထဝင်နှင့် GTA စီးရီး၏အကျော်ကြားဆုံးဂိမ်းများထဲမှ GTA San Andreas ကိုကစားလိုလျှင်သင်သုံးနိုင်သောကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Multi Theft Auto သည် open source work တစ်ခုဖြစ်ပြီး GTA San Andreas multiplayer mod ဖြစ်ပြီးသင်၏ကွန်ပျူတာများသို့အခမဲ့ download လုပ်နိုင်သည်။ ဤ mod ကြောင့်သင်၏ online GTA San Andreas game...
မှတ်ချက်။ GTA5Redux သည်တရားဝင် GTA5mod မဟုတ်ပါ။ ဤ mod ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်တွင်ဂိမ်း၏မူရင်းဗားရှင်းရှိလျှင်သင့်အားဂိမ်းဆာဗာများမှတားမြစ်ခံရစေနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောပြဿနာများသည်သုံးစွဲသူ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။ mod မထည့်သွင်းမီသင်၏ဂိမ်းဖိုင်များကိုအရန်ကူးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ဒီ mod ကို install...
Half-Life: Threewave သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကတည်းကပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့ပြီးဂိမ်းလောကတွင်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့သည့်ဂန္ FPS ဂိမ်း Half-Life အတွက်တီထွင်ထားသော online game mode တစ်ခုဖြစ်သည်။ Half-Life: Threewave သည်အခြေခံအားဖြင့် Capture the Flag game mode ကိုဂိမ်းထဲသို့ထည့်သည်။ မတူညီတဲ့ဂိမ်းများစွာမှာနေရာယူထားတဲ့ဒီ online game mode...
သတိပြုပါ၊ Mega City One သည် Half Life 2: Episode Two အတွက်တီထွင်ထားသော mod တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ကစားရန် Half Life 2: Episode Two ရှိရမည်။ Mega City One သည် Half Life2mod တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် Half Life3ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်သင်ငြီးငွေ့လျှင်သင်ရှာဖွေနေသည့်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ အဲဒါကိုမှတ်မိလိမ့်မယ်၊ ငါတို့က Half-Life...
Counter-Strike: Classic Offensive သည် CS 1.6 GO ကစားခြင်းကိုသင်လွဲချော်ပါကသင့်အားစိတ်ဝင်စားစေနိုင်သည်။ အမှီအခိုကင်းစွာတီထွင်ထားသောဤအခမဲ့ mod သည် CS: GO ရှိ CS 1.6 ၏အသွင်အပြင်နှင့်အခြေအနေကိုဖမ်းယူရန်အခြေခံအားဖြင့်ခွင့်ပြုသည်။ Counter Strike သည် 90...
Just Cause 3: Multiplayer Mod သည်သင်၏ဂိမ်းဖြစ်သည့် Just Cause3ဂိမ်းကိုသင်၏ Steam အကောင့်ရှိပါကအွန်လိုင်းဂိမ်း mode ကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Just Cause3သည်အလွန်ကြီးမားသောပွင့်လင်းသောကမ္ဘာကြီးပါဝင်သောအက်ရှင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းထဲမှာ၊...
GTA5Space Mode သည်ကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကစားနိုင်သော game mode တစ်ခုဖြစ်သည်။ GTA5Space Mode သည်အခြား game mode အားလုံးကဲ့သို့၎င်းကိုများစွာသောအန္တရာယ်များကိုပေးသည်။ mod များကိုတရားဝင်ထုတ်ဝေထားခြင်းမရှိသောကြောင့်မည်သည့်ပြဿနာကိုမဆိုထုတ်လုပ်သူကတာဝန်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် mod ထုတ်လုပ်သူများကဤအရာကိုအာမမခံပါ။...
Ultimate GTA5Superman Mod သည် GTA V Superman mod အသစ်ဖြစ်သည်။ GTA5Superman mod ကိုအကောင်းဆုံး GTA5mods တီထွင်သူ JulioNiB မှအခမဲ့ download လုပ်ခြင်းသည်လုံးဝအသစ်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ GTA Superman Mod ခလုတ်ကို နှိပ်၍ သင်၏ Windows ကွန်ပျူတာတွင်လုပ်ဖူးသမျှအစွမ်းထက်ဆုံး၊ ကြမ်းတမ်းသော၊ ထူးခြားသော၊ အရူးနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော Superman script mod...
Solo VPN application နှင့်သင်၏ Android ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစွာချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အများသုံး Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုများသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းဆိုးဝါးသောသူများအတွက်မုဆိုးတစ်ယောက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သောနေရာများရှိသည်။...
Tornado VPN အက်ပလီကေးရှင်းသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာအသွားအလာကိုပေးသည်၊ ပိတ်ဆို့ထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုသော့ဖွင့်ပြီးအခြေခံသီးသန့်တည်ရှိမှုကိုပေးသည်။ ဒေတာဝှက်ခြင်းဖြင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုဟက်ကာများမှကာကွယ်နိုင်ပါသည်၊ အချက်အလက်အားလုံးလုံခြုံပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုအာမခံသည်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်ပြီးဖွင့်ပြီး connect ကိုနှိပ်ပါ၊...
Total VPN သည်သင်၏ Android ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်တွင်အင်တာနက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်သော VPN application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြန်၊ အခမဲ့နှင့်ရိုးရှင်းသည်။ သင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သင်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ အသုံးပြုနိုင်သော VPN application နှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုလုံးသည်စာဝှက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်အများသုံး WiFi...
Firefox Private Network VPN သည် Mozilla ၏မြန်ဆန်လုံခြုံပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော VPN app ဖြစ်သည်။ သင်၏ကိရိယာ၏ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုကိုလုံခြုံစေရန်နှင့်သင်၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်တည်နေရာကိုဖုံးကွယ်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် Firefox VPN အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင့်အားဆာဗာ ၁၀၀ ကျော်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Firefox VPN Android...
အင်တာနက်ကိုလုံလုံခြုံခြုံနှင့်သီးသန့်လှည့်ပတ်ကြည့်ပါ။ အလွန်မြန်။ တည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုဖြင့်သင်၏အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပါ။ တည်နေရာများအကြားရိုးရှင်းစွာပြောင်းပါ၊ ထို့နောက်သင်၏ IP သည်အခြားနိုင်ငံသို့လွယ်ကူစွာပြောင်းလိမ့်မည်။ အမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သင်၏ privacy ကိုအမြင့်ဆုံးကာကွယ်မှုပေးပါလိမ့်မည်။ သီးသန့်ဆာဗာများ...
SuperVPN Free VPN Client သည် Android အတွက်အခမဲ့ VPN app ဖြစ်သည်။ SuperVPN၊ Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်သီးသန့်ကမ်းလှမ်းသော VPN အစီအစဉ်သည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ SuperVPN သည် Android ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သန်း ၁၀၀ ကျော် download လုပ်ထားသောအခမဲ့ VPN application တစ်ခုဖြစ်ပြီးတူရကီ Google Play စတိုး၌ download ရယူ၍...